Ukugcina Iincwadi Zakho Ukukhusela Izinto ezimbi kunye nokuSusa i-Musty Smells
Ngaba iincwadi zakho ezithandekayo zenze i-smell? Ukuthintela okubalulekileyo ekuqinisekiseni ukuba iincwadi azihlaziyizivumba ezimbi. Ukuba ugcina iincwadi zakho kwindawo epholile, eyomileyo, kukho ithuba elingcono kakhulu lokuba uya kuphepha umnikelo omnandi onokuthi iincwadi ezindala zingakhula. Nangona unemizamo yakho engcono, unokufumana i-mold okanye isikhumba kwiincwadi zakho. Ngelishwa, oku kungabenza bavumba i-musty. Ngezantsi, uzakufumana iingcebiso malunga nendlela yokulahla iphunga elibi kwiincwadi zakho.
Cinga apho Ugcina khona iincwadi zakho
Ukuba ugcina iincwadi kwiziko elingaphantsi, igalaji, i-attic okanye isitoreji yunithi, uya kufuna ukulungisa umbandela wokugcina ngaphambi kokuba uzame ukususa iphunga, isikhumba kunye nokubunjwa kwiincwadi zakho. Ukuba ulahla iphunga elibi uze uzibuyisele ngqo endaweni yokugcina indawo emanzini, uya kubona ingxaki ibuyela ngqo. Ubumanzi obuninzi obangela ukubola kunye nobunzima kunye nokushisa okukhulu kunokubangela ukuba iphepha lime kwaye liqhubekele - thumela iincwadi zakho endaweni epholile, eyomileyo.
Zikhusele ngeemiphephezi zokuthunga
Iibhonkco zokuthunga zikhusela iifom zeencwadi, zinceda ukugcina umswakama kude nencwadi. Kodwa i-jacket yothuli ayiyilanga lokumangalisa. Nangona usebenzisa iigebengu zethuli, qaphela apho ugcina khona iincwadi zakho, kwaye ugweme indawo ezinomthi, ezitshisayo, ezinokunyusa amathuba okuba zihlakulele isikhunta esibi okanye isikhumba.
Gweba ukudibanisa ngokukhawuleza kunye nephephandaba
Ezinye iingcali ezisetyenziselwa ukucebisa ukuba ugobe iincwadi zakho ngamaphephancwadi, okanye nakwiindawo zokushicilela iphephandaba phakathi kwamaphepha encwadi yakho.
Nangona kunjalo, ukudibanisa ixesha elide kunye namaphephandaba kungabangela umonakalo kwiincwadi zakho ngenxa ye-acidity kumaphephandaba. Ukuba usebenzisa iphephandaba ukukhupha iphunga elibi, qiniseka ukuba iphephandaba alinxulumene ngqo neencwadi zakho.
Gwema i-Bleach okanye i-Cleansers
I-Bleach (okanye ihlambululi) inokutshabalalisa kumaphepha eencwadi zakho.
Ukuba i-mildew kunye / okanye isikhunta kufuneka uwasuse, sebenzisa isambatho esomileyo, esilulayo ukususa into embi kakhulu.
De-Stinkify Book Yakho
Kwezinye iimeko, nangona unemizamo yakho engcono, ibhuku lakho liya kuhlala livumba i-musty, i-mildew okanye idala nje. Ngombulelo, kukho isisombululo esilula. Uya kufuna ezimbini zeplastiki - enye iya kufakwa ngaphakathi kwelinye. Dlulisa i-kitty ilitha ephantsi kwebhotile enkulu. Beka incwadi yakho kwisitya esincinci (ngaphandle kwesiqhekeza), wabeka isitya encinci seplastiki kwisitya esikhulu esikhulu. Beka isiqhekeza kwisitya esikhulu seplastiki. Unokushiya incwadi kule ncwadi "de-stinkifier" kwenyanga, eya kususa iphunga (naluphi na umswakama) encwadini. Ungasebenzisa kwakhona i-baking soda okanye amalahle kwi-de-stinkifier yakho yencwadi.
Iincwadi zeMiscellany: Iinkcukacha ezonwabileyo, ii-Quotes, kunye ne-Trivia
Incwadi Yenzelwe Yintoni?
Zingakanani Iindleko zokufunda kunye nokuthatha uvavanyo lweBar?
Imbali yeSilly Putty
Isikhokelo esibonakalisiweyo kwi-Middle C
Ingeniso ye-Elasticity of Demand